Lego လိမ့်မည် Minions အစုံထပ်မံနှောင့်နှေးရ?
Lego လိမ့်မည် Minions အစုံနောက်တစ်ကြိမ်နှောင့်နှေးကြလိမ့်မည်နည်း
07 / 03 / 2021 07 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 871 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, ရုပ်ရှင်ရုံ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, နှောငျ့နှေး, စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ငါ, ရုပ်ရှင်, ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်း, Lego, Lego Minions, Lego Minions: Gru ၏ထ, Minions, Minions: Gru ၏ထ, Movie,, တုပ်ကွေးရောဂါ, universal
နောက်ထပ်နှောင့်နှေးလာမည့်အဘို့ကြေညာခဲ့သည် Minions နောက်ဆက်တွဲ, ဒါပေမယ့်ပါလိမ့်မယ် Lego အစုံတူကံကြမ္မာကိုတွေ့မြင်?
Despicable Me ကိုဖြန့်ချိသောအခါရုပ်ရှင်၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်စဉ်ကိုမည်သူမျှကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရနိုင်ပါ minions ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာရုပ်ရှင်၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်သာမကရုပ်ရှင်ထဲမှနောက်ထပ်ဇာတ်ကားတစ်ကားအပြင်ပါ ၀ င်ခွင့်လည်းပေးခဲ့သည်။ Lego အစုံလမ်းကိုအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ထိုသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းယခုပင်ထပ်မံပြန်တွန်းလျက်ရှိသည်။
တစ်ဦးပြီးနောက် လွန်ခဲ့သော ယခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၂ ရက်အထိနှောင့်နှေးကြန့်ကြာလျှင် Universal ကယင်းကိုပြသခဲ့သည် Minions- ဖြစ်ပွားနေသောရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြားတွင် Gru ၏ထမြောက်ခြင်းသည်နောက်ကျသွားသည်။ သတင်းသည်ရုပ်ရှင်၏တွစ်တာအကောင့်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
"Minions: Rru of Gru "သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့သို့ပြောင်းရွေ့သွားသည်။
Butt စောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကတိ။ pic.twitter.com/Yr6kNnWy6W
- #Minions (@Minions) မတ်လ 4, 2021
အသစ်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုဇူလိုင်လ ၁ ရက် ၂၀၂၂ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည် Lego Group ၏ကိုယ်ပိုင်ဂျာမန်လက်လီရောင်းဝယ်ရေးကတ်တလောက် အတည်ပြုပြောကြား ယခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဇာတ်ကားများအတွက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ယခုရုပ်ရှင်မထွက်ခင်တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။
ဒါဟာအစုံယခု blockbuster ဖြန့်ချိဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသံသယဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့နှင့်အတူတိုက်တွန်း, နောက်ထပ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ပြန်တွန်းလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ယခုအချိန်အထိဘာမျှအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေ။ နှစ်ခု Minions အစုံပြီးသားရှိသည် ဖြန့်ချိ အစောပိုင်းဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးသုံး - 75546 Minions Gru 'တွင်Lab မှ, သင်တန်းအတွက် 75547 Minion ရှေ့ပြေး နှင့် 75550 Minions ကောင်းဖူတိုက်ပွဲကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်တစ် ဦး ပိုးအိစံ သူတို့ကိုပူးပေါင်းလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ဤအဖွင့်အပေါ် updated စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ် အသစ်အစုံ နောက်တဖန်နောက်ကျရှိပါတယ်လျှင်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပရိသတ်တွေလက်ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
← ၂၁ နှစ်အတွင်းပထမဆုံး LEGO Technic Polybag ကိုကြည့်ပါ ဦး
LEGO VIDIYO သည်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော DJ deck ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် →